सार्वजनिक यातायातमा आफुखुशी भाडा वृद्धि, नियमन किन हुँदैन ? « Postpati – News For All
सार्वजनिक यातायातमा आफुखुशी भाडा वृद्धि, नियमन किन हुँदैन ?
फागुन २४, काठमाडौँ । कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएका केही यातायात समितिले आफूखुशी सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन थालेका छन् ।
उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष रोशन पोखरेल ऐनमा भएको यातायात निरीक्षकको व्यवस्था विभागले नगर्दा यातायात क्षेत्रका धेरै समस्या समाधानमा भन्दा जटिल बन्दै गएको बताउनुहुन्छ । ऐन बनेको २६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा यात्रु मर्कामा पर्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । रासस